Estera 4: 1-17
Estera 3 Estera 4 Estera 5
Ary tonga teo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka azy izy nefa tsy nisy nahazo niditra teo amin'ny vavahadin'ny mpanjaka, raha nitafy lamba fisaonana.
Ary niditra ny ankizivavin'i Estera sy ny tsindranolahiny ka nilaza izany taminy. Dia nalahelo indrindra ny vadin'ny mpanjaka, ka nampanatitra lamba hitafian'i Mordekay izy mba hanesorany ny lamba fisaonana taminy; nefa tsy nety nandray izy.
Ary Estera niantso an'i Hatàka, tsindranolahin'ny mpanjaka, izay notendreny hanompo azy, ka nampitondra teny azy ho any amin'i Mordekay, mba hahafantarany izay anton'izany.
Dia nivoaka Hatàka nakany amin'i Mordekay ho ao an-kalalahana eo an-tanàna, dia ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka;
Fa Estera naniraka an'i Hatàka indray hanao an'i Mordekay hoe:
Ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isan-tokony eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza na iza mankeo amin'ny mpanjaka ho eo an-kianja anatiny, na lehilahy na vehivavy, nefa tsy nantsoina, dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy, afa-tsy izay hotondron'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena hahavelona azy; Ary izaho anefa dia tsy mbola nantsona hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony telo-polo andro izay.
Ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'i Estera hoe: Aza manao anakampo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra hianao, saingy ao an-tranon'ny mpanjaka;
fa raha hangina mihitsy hianao amin'izao andro izao, dia hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa hianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana; Ary iza no mahalala, fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana?
Mandehana Ary, vorio ny Jiosy rehetra izay hita ato Sosana, Ary mifadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina; Ary izaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, Ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza; koa raha tàhiny maty aho dia maty.